ikhompyutha kabili uhlelo flat ukunitha umshini - China Taizhou Boding Imishini
Ikhompyutha flat ukunitha umshini
Shoes Vamp engenhla ukwenza umshini
ikhompyutha kabili uhlelo flat ukunitha umshini
DZ252S kuyinto 52 amayintshi nge ukuthutha eyodwa izinhlelo double roller olulodwa, devicde nge up-isikhundla roller bahlangabezane nemfuneko ukungezwani ngoba ukunitha esinqunyiwe .Equipped nge-infrared uhlaliseke uhlelo alamu, ungagwema ngempumelelo ulahlekile alamu futhi inaliti hit. Lokhu deviced ngohlelo smart futhi inzwa infrared ukubona endaweni ukunitha kuphela ukugwema okwethusayo miss. Buyani ngokuhlanganyela kulawulwa sandise motor, ukwandisa isivinini ukuthutha ukubuya futhi umkhiqizo kanye ugweme bakhathale of ...
DZ252S kuyinto 52 amayintshi nge ukuthutha eyodwa izinhlelo double roller olulodwa, devicde nge up-isikhundla roller bahlangabezane nemfuneko ukungezwani ngoba ukunitha esinqunyiwe .Equipped nge-infrared uhlaliseke uhlelo alamu, ungagwema ngempumelelo ulahlekile alamu futhi inaliti hit. Lokhu deviced ngohlelo smart futhi inzwa infrared ukubona endaweni ukunitha kuphela ukugwema okwethusayo miss. Buyani ngokuhlanganyela kulawulwa sandise motor, ukwandisa isivinini ukuthutha ukubuya futhi umkhiqizo kanye ugweme bakhathale we wesitimela ukuthutha.
Nge ezobuchwepheshe, ukufeza amaphethini ukudluliswa, pointel, tuck, intarsia, jacquard, kabili ethafeni jersery, sobala umumo ukuma ezifihliwe nezinye esibona siwubonisa njalo ukunitha imisebenzi. Obumbene ijezi eziyisisekelo olulodwa noma kabili, okungajwayelekile multi-imibala jacquard, intarsia, izintambo, pointel Indwangu. Ifanele usilika, amakhemikhali fibre, uvolo, fibre acrlic, ntambo okuxubile, ukotini ntambo ukuze obumbene ijezi collar, placket, waseBhetlehema, cuff, isikhafu, ephaketheni, ibhulukwe kanye nezinye ukunitha Indwangu.
Kala 5 / 7G 7G 9G 10G 12G 14g 16G
Izinaliti / Ububanzi 364needles / 52inches 364needles / 52inches 468needles / 52inches 520needles / 52inches 624needle / 52inches 728needles / 52inches 832needles / 52inches
Umsebenzi main Obumbene ijezi eziyisisekelo olulodwa noma kabili, okungajwayelekile multi-imibala, jacquard, intarsia, izintambo, pointel Indwangu efanelekayo usilika, amakhemikhali fibre, uvolo acrylic fibre, ntambo okuxubile, ukotini ntambo ukuze obumbene ijezi collar, placket, waseBhetlehema, cuff, isikhafu , ephaketheni, ibhulukwe, nezinye ukunitha Indwangu.
Ukwaluka System ukuthutha Single izinhlelo double noma izinhlelo ezintathu, nge ezobuchwepheshe, ukufeza amaphethini ukudluliswa, pointel, tuck, intarsia, jacquard, kabili ethafeni jersery, ukuma appaent, ukuma ezifihliwe nezinye esibona siwubonisa njalo Ukwaluka imisebenzi.
Ukwaluka Speed Max isivinini ukunitha 1.6M / S. 32 isivinini izigaba kulawulwa Servo motor.
Sitch Wugqinsi 64 ukuminyana Ukukhetha ububanzi 0-650 kulawulwa sandise motor, emihle kagesi ulungise ubuchwepheshe.
Dynamic Thunga Deviced ngu ashukumisayo Stitch ubuchwepheshe, kuzuzwe yaseZimbabwe ezihlukahlukene kwelinye Yiqiniso futhi ezihlukahlukene kwabantu Yiqiniso eyodwa ukuthuthukisa kniing efficency futhi ezihlukahlukene.
ukudluliselwa ubambo Mahhala transter izindlela double phakathi nangemuva eedle ngesikhathi esifanayo futhi akukho komkhawulo by ukuthutha ukunyakaza. Dlulisa futhi obumbene ngamunye.
Sinker Ukuhlehlela ukulawula imoto le Sinker adjustable ukufeza ekubumbeni amaningi futhi umsebenzi lalanda.
Rackings Single Noma Double Motor drive zindawo zokusesha ezethusayo, sifinyelele 1/2 noma 1/4 inaliti zindawo zokusesha ezethusayo ngasiphi isikhundla. Double acking max 2.5 amayintshi uhlangothi futhi esikabili max 5 amasentimitha, deviced emshinini 5G, 7G, futhi 5 / 7G. Single zindawo zokusesha ezethusayo max 2inches, deviced ku 9G, 12G, 14g, futhi umshini 16G.
Speed ​​High Buyisela Buyani joine kulawulwa sandise motor, ukwandisa isivinini ukuthutha ukubuya futhi productiviy kanye ugweme bakhathale we wesitimela ukuthutha.
roller Kudivayisi DZ252S deviced nge sehlise ikamu futhi up-isikhundla roller, DZ252S deviced nge up-isikhundla oller; 24sections lokulawula othomathikhi nge sesi- ukulungiswa .Fulfil le tack ephelele phansi lendwangu futhi imfuneko ukungezwani ngoba ukunitha portionable.
ntambo Roller Positive ntambo roller abalawula te ukungezwani we ntambo ukuze gurantee izinga lendwangu.
ntambo yenkampani yenethiwekhi 2 * 8 ntambo abathwali deviced ku 4 esikabili kuholele wesitimela.
Ukuphepha ikhava umshini Okugcwele ukunciphisa uthuli isikhangiso noice. Cover inzwa, inkinobho esiphuthumayo, kudivayisi cisha futhi inkomba ukuqinisekisa ukuphepha.
Auto Stop Umshini auto stop lapho ntambo ikhefu, ntambo ngokuhlanganyela wanamathela, Indwangu roll ngaphakathi, inaliti hit, sindisa, iphutha hlelo futhi Uhlelo ukuphela kwenzeka.
Needle detector Ziphethe infrared uhlaliseke uhlelo alamu, ungagwema ngempumelelo ulahlekile alamu futhi inaliti hit.
computer System LCD qapha, touch screen, isikhombimsebenzisi sokuqhafaza, USB ne imput net, 1GB RAM isitoreji ifayela elikhulu.Gada: idatha Ukusebenza, awahlanganise idatha optical futhi adjustable phakathi ukukhiqiza umsebenzi elula.
uhlelo Yohlelo uhlelo lwekhompyutha umshini Kulula ukubuyekeza futhi ukusekela CNT / HCD / OOO ifayela iphethini.
Multiple operation ulimi lwesistimu kuhlanganisa Chinese, zesiNgisi nezinye izilimi.
Ifayela wokufaka USB ne net
Amandla Off Memory Deviced CMOS eziphambili ubuchwepheshe, lapho cisha kwenzeke idatha ukunitha futhi ifayela igcinwa ngoba ukuqalisa phansi ukunitha.
Uxhumano Net esinejubane (-Ethernet), esiphezulu ukuxhuma imishini 254 ifayela input ukugcwalisa monior nedatha nokwabelana.
Dimension (Uhlelo Double) L * W * H 2915 * 940 * 2010mm, (ezintathu ohlelweni) L * W * H3015 * 940 * 2010mm
amandla AC 220V / 380V Imvamisa 50HZ / 60HZ Amandla: 1.5KW / 2KW
: Langaphambilini ikhompyutha Single-uhlelo flat ukunitha umshini
Okulandelayo: -System ezintathu izicathulo Vamp engenhla ukwenza umshini
6f 144n Sock computer Setting Machine
Auto flat sezinto Machine
Auto Heel Upper-Isibopho Machine
okuzenzakalelayo Seamless Glove Ukwaluka machine
okuzenzakalelayo Sock Ukwaluka machine
X6 okuzenzakalelayo Cutting Machine
Cap Ukwaluka Machine
Carpet Ukwaluka Machine
Eshibhile Inani Machine For Ikhaya Sebenzisa
Collar Flat Ukwaluka machine
Collar Ukwenza Machine
Compuiter ijezi Machine
Computeized Flat Ukwaluka Machine
Computer Control Ukwaluka Machine
Computer elawulwa Ukwaluka machine
Computer Flat sezinto Machine Nge Sinker
Computer Flat Ukwaluka machine For Isitolo esidayisa yonke impahla
Ikhompyutha Flat Machine
Computer Flat Sock Ukwaluka Machine
computer Flat Umbhede Ukwaluka machine
computer Jacquard Ukwaluka Machine
computer isikhafu Flat sezinto machine
Computer Ukwaluka Machines
Croc het Ukwaluka Machine
Emqulwini Die Cutting Cindezela Umshini
kabili System Ikhompyutha Flat Ukwaluka machine
Indwangu Ukuze ijezi Ukwenza Machine
Flat sezinto Machine Nge Sinker
Flat Ukwaluka machine For Textile Imboni
Flat Ukwaluka Machine Nge Ukunikeza Good
Flat Ukwaluka isitayela Ukwaluka Machine
Flat Single Jersey Ukwaluka Machine
Sock Flat Ukwaluka Machine
Okugcwele Ikhompyutha flat Ukwaluka umshini
Jacquard ngokugcwele Flat Umbhede Ukwaluka Machine
ngokugcwele Jacquard Flat sezinto Machine
ngokugcwele Machine Ukwaluka
Glove Ukwaluka machine
Quality Good ijezi Ikhompyutha Ukwaluka umshini
Hat Ukwaluka Machine
Hat Ukwenza Machine
Ikhaya Ukwaluka computer Machines
Hooded ijezi Ukwenza Machine
Industrial Flat Ukwaluka Machine
Industrial Glove Ukwenza Machine
Insole Isibopho Machine
Ukwaluka machine Inani
Legging Ukwaluka Machine
Machine For slipper Upper
Manual Flat Ukwaluka machine
Manual ijezi Ukwaluka Machine
Abesilisa ijezi Polo Ukwenza Machine
multi Gaug e Industrial Flat sezinto Machine
Muslim Cap Ukwaluka Machine
Inamandla Hat Machine
Pu Isikhumba embossing Machine
isikhafu Cap Ukwaluka machine
isikhafu Ukwaluka Machine
Shoe Upper Ukwaluka Machines
Isiliva Reed Hand Flat Ukwaluka Machine
Single senqola Double System
Single Ukwaluka Flat umshini
Single System Ukwaluka Machine
Single Machines System
Single-System Ikhompyutha Flat Ukwaluka Machine
Sjg / 562/522/482 Ukwaluka machine
Sock Ukwaluka umshini
Stoll Flat Umbhede Ukwaluka Machines
Ibhande Ukwaluka machine
ijezi Ikhompyutha Ukwaluka machine
ijezi Flat Ukwaluka machine
Abesilisa ijezi Ukwenza Machine
T Shirt Ukuphrinta Machine
Universal Flat Ukwaluka Machine
Upper Inameka Machine
Lining Upper Iyanamathisela Machine
Upper kushunqe Machine
Uvolo isikhafu Ukwenza Machine
Yebo Ikhompyutha Ukwaluka Machine
ikhompyutha Single-uhlelo flat ukunitha umshini